संगीत शताब्दी | मझेरी डट कम
editor — Sat, 02/15/2014 - 19:24
त्यसबेला राणाका सचिवसम्मले मात्र आफ्ना घरमा रेडियो राख्न पाउँथे। दरबारमा गाउन गएकै बेला उनले सेतुरामका गीत सुन्ने मौका पाए। सेतुराम नेपाली गीत रेकर्ड गराउने पहिलो गायक हुन्। उनले विसं १९६५ मै नेवारी लोकगित 'राजामती' रेकर्ड गरेर नेपाललाई गीति–संसारमा पदार्पण गराएको मानिन्छ। समीक्षक प्रकाश सायमीद्वारा लिखित 'नेपाली संगीतको एक शतक' पुस्तकमा भने उनले मोतीराम भट्टको गजलमा आफ्नो स्वर दिएको उल्लेख छ।
पूर्वी नेपालको लामिछाने–गुरुङ परिवारमा विसं १९६४मा जन्मेकी मेलवादेवी १९७१मा काठमाडौं आएपछि प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा दरबारमा गाउन थालेको इतिहास छ। 'नेपाली संगीतसाधक' पुस्तकमा रामशरण दर्नालले 'दरबारी कुचक्र र षड्यन्त्रका कारण २२ वर्षको उमेरमा मेलवादेवीले सिंहदरबार त्याग्नुपरेको' प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। चन्द्रशमशेर हटेर जुद्धशमशेर सत्तामा आएपछि कोपभाजनको डरले मेलवादेवी भारतको कलकत्ता पसेको उक्त किताबमा छ।
गीतमा महिलाअधिकारको कुरा उठाउने चेत उनमा उतिबेलै विकास भइसकेको थियो। यी कुनै पनि कुरा जुद्धशमशेरलाई सह्य नहुने भएपछि उनी प्रवास पसिन्। उनको अर्को गीत 'आऊ न बस पियारी मिरमिरे झ्यालैमा'लाई निर्देशक यादव खरेलले फिल्म 'प्रेमपिण्ड'मा समेत राखेका छन्।
प्रजातन्त्र आएको महिना दिन नबित्दै तत्कालीन 'क्रान्तिकारी रेडियो'लाई राज्यले 'रेडियो नेपाल'मा रूपान्तरण गर्दै थियो। तिनताक रेडियोको औपचारिक सुरुआतमा के–के कार्यक्रम भए, रिमाललाई पूरा हेक्का छैन। यत्ति थाहा छ, मुलुकका लागि त्यो ऐतिहासिक दिन थियो, किनभने देशमा रेडियो खुल्यो।
रिमालले पनि इतिहास रचे, 'रेडियोमा गाउने पहिलो गायक'मा दर्ता भएर।
त्यसबेला रेडियो नेपालमा स्टुडियो थिएन। सामान्य कोठाबाटै प्रसारण हुन्थ्यो। 'कहिले त समाचार पढिरहेका, गीत गाइरहेका बेला कौवा कराउँथ्यो। हाम्रो र कौवाको गीतसँगै सुने स्रोताले,' उनी सामान्य स्तरबाट सुरु भएको रेडियो नेपालको अवस्था दर्शाउँछन्।
रानुदेवी, हिम्मतबहादुर र किशोरीदेवी रिमाल रेडियो छिर्दाका समकालीन थिए। 'क्रान्तिकारी रेडियो'बाट रेडियो नेपाल प्रवेश गरेकी रानुदेवीले रेडियोमा गाउने पहिलो गायिकाको इतिहास बनाइन्। त्यसलगत्तै सरकारले केही गायक–गायिकालाई जागिर दिने योजना ल्याएपछि नातिकाजी, शिवशंकर र पन्नाकाजी पनि थपिए। लोकप्रियता बढ्दै गएपछि गायक/गायिकाको लस्कर बढ्न थाल्यो रेडियो प्रांगणमा। स्वर परीक्षा र गाउने पालोको नियम बस्यो।
'आधुनिक नेपाली संगीतको विकास विभिन्न चरणमा भयो, यसमा रेडियो नेपालको स्थापना सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फड्को हो, जसले नेपाली गीत–संगीतलाई आमजनतासम्म पुर्याउने काम गर्योन,' मुकारुङ भन्छन्, 'गीत–संगीत क्षेत्रमा नयाँनयाँ सर्जक जन्माउनमा पनि रेडियो नेपालको ठूलो हात छ।'
भारतीय राजनीतिमा आएको परिवर्तन, रत्न रेकर्डिङ, ट्र्याक रेकर्डिङ प्रविधि र डिजिटल रेकर्डिङको समेत हात देख्छन् उनी। 'ब्रिटिसले भारत कब्जा गरेपछि त्यहाँका राजा–महाराजाकहाँ काम गर्ने संगीतकर्मी बेरोजगार भए। उनीहरूमध्ये केहीले नेपालको दरबारमा काम पाए। त्यो संगीतको प्रभाव यहाँ पनि पर्यो,' उनी भन्छन्, 'ब्रिटिसले भित्त्याएको पाश्चात्य बाजा र गीतको प्रभावबाट पनि नेपाली संगीत राणाकालमै ग्रस्त भयो।'
'क्रान्तिकारी रेडियो'ले विराटनगरबाट आधुनिक नेपाली गीत बजाए पनि काठमाडौंमा त्यो चलन सरिसकेको थिएन। उनलाई एउटा पनि नेपाली गीत कण्ठ थिएन, हिन्दी गीत गाएर स्वर परीक्षा दिए।
उनी भने एउटै कौतुहलमा गुज्रिए, 'रेडियोमा मेरो स्वर कस्तो सुनिन्छ होला!'
रेडियोमा बोल्ने र गाउने व्यक्ति किरण खरेललाई 'सुपरम्यान' जस्ता लाग्थे। काभ्रेपलान्चोकको खरेलथोकबाट राजधानी आएर ओटुटोलमा पढ्न बस्दा उनी तिनै 'सुपरम्यान'हरूको घेराभित्र थिए। २०१३ सालतिर तारादेवी, प्रेमध्वज, नारायणगोपाल, माणिकरत्नजस्ता कलाकारको छिमेकी हुन पुगे खरेल।
गीत रचनाको सुरुआती दिनमा आफ्नो त्यही बाल्यकालीन प्रभाव उनले लिपिबद्ध गरे। 'पर्वतीकी छोरी हुँ म पार्वती हो नाउँ'ले गीत रचनामा खरेललाई स्थापित गरिदियो।
'ए दूरका सितारा, मेरो चाँदनी कहाँ छ?' यो रचनासँगै कलाकारको पंक्तिसँग जोडिन पुगे उनी। 'फूलबारी' कार्यक्रम हेर्न आएका राजा महेन्द्रले रुचाएपछि उनको अर्को गीत 'चन्चले आँखाले के गरे मलाई' रेकर्ड गर्न पैसा दिए।
बिस्तारै किरणका गीत भैरवबहादुर थापा, नातिकाजी, शिवशंकरजस्ता गायक एवं संगीतकारको रोजाइमा पर्यो। मविवि शाह, बालकृष्ण सम, माधवप्रसाद घिमिरे, रत्नशमशेर थापा, धर्मराज थापाजस्ता रचनाकारको पंक्तिमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए खरेल।
निजी लगानीको पहिलो फिल्म 'माइतीघर'मा उनले फिल्मका लागि पहिलो गीत लेखेका थिए। जयदेवको संगीतमा आशा भोसलेलगायत चर्चित भारतीय गायक–गायिकाको स्वरमा गीत रेकर्ड भएर आउँदा उनी चकित परे। पहिलोपटक आफ्नो गीत छायांकन भएको देख्दा उनको खुसीले आकाश छोलाजस्तो भयो।
विसं २०२० को दशकलाई नेपाली संगीतको स्वर्ण युगका रूपमा सम्भि्कइन्छ। अहिले पनि उत्तिकै रुचाइने कालजयी गीत त्यही दशकका उपहार हुन्। यस युगका अनमोल रत्नहरू नातिकाजी, शिवशंकर, नारायणगोपाल, तारादेवी, बच्चुकैलाश नेपालमै तिखारिएका थिए भने दार्जिलिङबाट अम्बर गुरुङ र गोपाल योञ्जन थपिए। यी स्रष्टाको सहकार्यमा जति गीत बने, ती टीकाउ बने।
गोपाल योञ्जन दार्जिलिङका ढुकढुकी थिए। नेपालको सुगम संगीतमा नारायणगोपालको प्रगति ग्राफ बढिरहेको थियो। 'स्वर्गकी रानी', 'ए कान्छा ठट्टैमा यो बैंस जान लाग्यो', 'मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानीजस्तो' लगायत गीतबाट उनले आफ्नो अब्बल कलाको प्रमाण दिइरहेका थिए।
'तिम्रोजस्तै मुटु मेरो पनि', 'मेरो गीत मेरै प्रतिविम्ब हैन', 'जीवनदेखि धेरै धेरै नै थाकेर', 'लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी', 'गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला', 'मेरो गीतमा उभिएको धुलो'ले लगायत गीत नारायणगोपालले कोसेली पाएका थिए। तीमध्ये केही कलकत्तामा रेकर्ड भए, केही रेडियो नेपालमा। यिनै गीत नेपाली संगीतको स्वर्णिम कालखण्ड बनाउने आधारमध्येका बने।
त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा एउटा किशोर स्वर परीक्षा दिन रेडियो नेपाल छिर्यो। 'स्वर्ण युग'को उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला संगीतमा करिअर बनाउन तम्सिएका थिए, शम्भुजित बास्कोटा। २०२८ सालमा उनले स्वर परीक्षा पास गरे। गीत गाउने पालो आउन दुई वर्ष लाग्यो। गायनमा 'नाच्देऊ मैच्याङ' जस्तो लोकशैली रोजेका शम्भुजीतले संगीतकारका रूपमा भने सुगम संगीतको कठिन बाटो रोजे। उनको संगीतमा 'तिमीले भनेका सारा देव छोएर' र 'पर्खी बसेँ आउला भनी' बोलको गीत नारायणगोपालले समेत गाए। दीपक खरेलले 'पूर्णिमाको रात पनि' शम्भुजीतकै संगीतमा गाए।
२०३५ सालमा स्वर परीक्षा पास गरेर रेडियो नेपाल छिरेका उनी अहिले वरिष्ठ संगीत संयोजकमा कार्यरत छन्। संगीतमा लाग्नेले लेखन, कम्पोजिसन र प्रस्तुतिकरणलाई मात्र ध्यान दिएर हुँदैन रहेछ भन्ने बुझेपछि उनी संगीतको अध्ययन र अनुसन्धानमा लागे। नेपालको सांगीतिक इतिहासलाई अनुसन्धानबाट र नयाँ संगीतलाई अनुभवबाट बुझेका मुकारुङ प्रविधिको फड्कोले पुराना स्रष्टालाई पछि पारेको देख्छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, 'सन्डे मर्निङ लभ यु' गीतको प्रसिद्धि। स्वर परीक्षा पास नभए गायक बन्नै नपाउने समय बितेको दुई दशक पनि भएको छैन। आफ्नो गीत रेडियो र टेलिभिजनको सहायताबिनै चर्चाको शिखरमा पुर्यातउन सकिने उदाहरण पेस भइसकेको छ। 'सन्डे मर्निङ लभ यु'का गायक भीम निरौलालाई प्रसिद्ध हुन कुनै परीक्षा दिनुपरेन। उनी आफैंले गाए, भीडियो बनाए, यु ट्युबबाट संसारलाई देखाए।
पुराना साधकले संगीतको व्यावसायिक पाटोलाई महत्व दिएनन्। मुलुकमा टेलिभिजन (२०४२) खुलिसके पनि भीडियो बनाउन चासो दिँदैनथे। साथीभाइको धेरै करकापपछि २०४५ सालमा नारायणगोपाल बल्ल 'एकल साँझ'का लागि तयार भएका थिए। बच्चुकैलाशले त मिडियालाई निषेध नै गरे। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको वर्चश्व रहेका बेला काठमाडौंका कलेजमा गाउँदै हिँड्ने रामकृष्ण ढकालले सजिलै सांगीतिक साँझ गर्ने मौका पाए।
नारायणगोपालले एकल साँझ गरेकै वर्ष रामकृष्ण मञ्चमा उक्लिन पाए। 'महान गायक नारायणगोपालले जीवनको उत्तरार्द्धमा स्वीकार्नुभएको अवसर मैले माइक्रोफोन अगाडि उभिनेबित्तिकै पाएँ,' संगीत र आम्दानी सँगसँगै आयो ढकालको जीवनमा।
१२ वर्षका ढकालको स्वर कसैले नराम्रो भन्न सकेनन्, उनले गीत रेकर्ड गराउन पनिसकेनन्। 'बालगित गाउने उमेरमा आधुनिक गीत!' रेडियोमा उनीबारे यस्तो टिप्पणी भएपछि त्यहीँका गायक जयनन्द लामाले सिधै रेडियोका निर्देशक भोग्यप्रसादकहाँ लगे। र, गाउन पाउने गराए।
पुराना सर्जकले साधना गरे, संगीतबाट आर्थिक लाभ पाएनन्। रामकृष्ण संगीतमा गुणस्तर पेस गर्दै आर्जन गर्ने पंक्तिका प्रतिनीधि हुन्। उनले एकल साँझमै रेकर्ड गरिएको क्यासेटबाट मनग्य आर्थिक लाभ गरे।
नारायणगोपालहरूले गीत–संगीतबाट पैसा कमाएनन्, दुःखै पाए। रामकृष्णको आगमन र संगीतमा व्यावसायिकतासँगै आयो।
उनले मुम्बईमा गीत रेकर्ड गर्न पाउने भए। म्युजिक नेपालको 'फोर ट्र्याक'भन्दा चार गुना बढी 'सिक्सटिन ट्र्याक'मा रेकर्ड हुने भयो उनको गीत। आठजनाको शब्द र संगीत बोकेर उनी एक्लै भारतको मनोरञ्जन नगरी पुगे। 'एकै दिनमा भोकलको काम सकियो,' उनले ठाने, 'रेडियो नेपालमा लाइभ गाउँदाको अभ्यासले छिटो काम सक्न मद्दत गर्योन।'
रातभरि छाप्दा पनि क्यासेटको माग पूरा गर्न नसकेको दुःख भोगेका रामकृष्ण केही वर्षमै क्यासेट नबिक्ने समस्याको भुक्तभोगी भए। सिँढीको चलन आयो, तर लामो टिकेन।
सजिलोका लागि उनले 'गायक समाज' खोलेका छन्। 'कपीराइटको कानून कार्यान्वयन भएको छैन। रोयल्टी उठ्दैन। अब ती चिजलाई आफ्नो हातमा पार्न सक्नुपर्छ,' उनी सिआरबिटी, पिआरबिटी, अनलाइन मार्केटीङजस्ता नयाँ युगले देखाएको आयस्रोतलाई कसरी आफ्नो पहुँचमा ल्याउने भन्ने चिन्तनमा छन्।
ढकालजस्तो बाजागाजा पहिल्यै रेकर्ड भइसकेको ट्र्याकमा स्वर भर्न छिट्टै अवसर पाउने गायकमा पर्दैनन् प्रेमध्वज प्रधान। रेकर्डिस्टको इसारामा स्वर भर्ने युगलाई प्रेमध्वजले त्यति अपनाएनन्। 'कहिलेकाहीं भजन रेकर्ड गर्न गएँ, आफ्ना गीत त लाइभ रेकर्ड गरिएको हो,' उनी भन्छन्।
करिब एक वर्षअघि 'पुस्ता' एल्बम तयार पार्दा यादव खरेललाई काम गरेजस्तै लागेन। 'एकएकजना गरेर आउँछन्, काम सकेर जान्छन्। कम्प्युटरमा सबैको काम मिसाएर रेकर्डिस्टले एल्बम दिन्छ,' सजिलै हार्डडिक्समा गीत पाउँदा उनले 'यस्तो पनि हुँदो रैछ जिन्दगीमा कहिले कहिले' को समय सम्भि्कए। नातिकाजी, फत्तेमान र तारादेवीहरूको अनुहार पसिनाले भिजेको सम्भि्कए।
'पहिले यति सजिलो भएको भए के हुन्थ्यो होला?,' भन्छन्, 'तारादेवीको पेट उध्रिने थिएन। आवाज पनि नतिखारिन सक्थ्यो।'
टेलिभिजन खुलेपछि रेडियोमा गीत बजेर मात्र गायक/गायिकाको धित नमर्ने भयो। रेडियोको आकर्षणको हिस्सा बिस्तारै टेलिभिजनमा सर्न थाल्यो।
देशको एउटा मात्र टेलिभिजनमा भीडियो बनाउनेको लर्को लाग्थ्यो। केही राम्रा गीतको आउटडोर सुटिङ गरेर भीडियो बनाउने काममा रोशनप्रताप राणा सक्रिय देखिए।
'हेर्ने गीत' को मोहमा परे कलाकार। नारायणगोपालको एकल साँझदेखि अरुण थापा, तारा थापालगायत कलाकारलाई भीडियोमा उतारेका रञ्जित टेलिभिजन प्रविधि सहज बनेसँगै भीडियो निर्माणमा बाढी आएको बताउँछन्।
'एकैजनाले, एउटै कोठामा बसेर सबै काम गर्न सक्ने भएपछि भीडियोको बाढी आयो,' रञ्जित भन्छन्।
म्युजिक भीडियो देखाउन त टेलिभिजनमा सांगीतिक कार्यक्रम बनाउने र चलाउनेलाई हात नलिई सुख नहुने गुनासो हाकाहाकी सुनिन्छ।
गायक तथा संगीतकार शिशिर योगी थोरै म्युजिक भीडियो बनाउने कलाकारमा पर्छन्। उनलाई 'हेर्ने गीत'मा उति मोह छैन। मौलिक शब्द र मन छुने संगीतमा डुबेर गाउन सकियो भने गीत ओझेल नपर्ने विश्वास उनको छ। गम्भीर गीत टिभीमा हेर्दा होइन, आँखा चिम्लेर सुन्दा आनन्द आउने उनी बताउँछन्।
आफूलाई नसोधी आफ्नो गीत यु ट्युमा राख्ने म्युजिक कम्पनीसँग पनि उनको गुनासो छ। रोयल्टी ठग्ने, सिआरबिटीको उचित रकम नदिने कम्पनीको व्यवहारले उनी दुःखी छन्। 'प्रविधि बुझेका चम्बुहरूले के के गरेर कमाए। कलाकारको त शोषण नै छ अहिले पनि,' उनी भन्छन्।
थपघट गरेको के थिएँ